Sina Sides spray spray factory sy mpanamboatra | Dingtaisheng
Ny tadin-tsifotra efatra-lalana namboarina isaky ny fitoeram-pandehanana dia mety hahatratra ny vokany mitovy amin'ny toerana misy ny lovia eo amin'ny sosona ambony sy ambany, eo anoloana, any aoriana, havia, havanana ary hahatratra ny kalitaon'ny fanafanana sy ny fanafoanana. Ny modely fanaraha-maso ny mari-pana (rafitra D-TOP) novolavolain'i DTS dia manana fifehezana hafanana hatramin'ny 12, ary ny dingana na ny fahamendrehana dia azo fidina arakaraka ny vokatra sy ny fomba fanahafana fanafodin-tsakafo samihafa, mba hamerenana sy hiorenanana eo anelanelan'ny vokatra. nohamarinina tsara, ny hafanana dia azo fehezina ao anatin'ny ± 0,5 ℃.
Ny modely fanaraha-maso ny tsindry (rafitra D-TOP) novolavolain'ny DTS dia manitsy hatrany ny tsindry mandritra ny fizotrany rehetra hanitsiana ny fiovan'ny tsindry anatiny amin'ny fonosana vokatra, hany ka mihena ny ambaratongam-bikan'ny famonosana vokatra, na inona na inona fitoeran-javatra henjana ny kapoaka vita am-bifotsy, ny kapoaka vita amin'ny aliminioma na ny tavoahangy plastika, ny boaty plastika na ny fitoeram-bary malefaka dia mety ho afa-po mora foana, ary ny tsindry azo fehezina ao anatin'ny ± 0,05Bar.
Fonosana vokatra madio tanteraka
Ny exchanger hafanana dia ampiasaina amin'ny fanamafisana sy fanamafisana ankolaka, mba tsy hifandraisan'ny etona sy ny rano mangatsiaka amin'ny rano fanodinana. Ny fahalotoana ao anaty etona sy rano mangatsiaka dia tsy hoentina any amin'ny valin'ny fanamorana, izay ialana amin'ny fandotoana faharoa amin'ny vokatra ary tsy mitaky akora simika amin'ny rano (Tsy mila ampiana klôro), ary ny ain'ny serivisin'ny mpanondrana hafanana koa nitatra be.
> Rano kely fizarana kely dia mivezivezy haingana hahatratra haingana ny mari-pahaizana momba ny fanamorana.
> Tsy toy ny fanamasinana setroka madio, tsy ilaina ny mivoaka alohan'ny fanafanana, izay mamonjy fatratra ny setroka ary mitahiry setroka 30% eo ho eo.
Tazomy ny rano mety amin'ny faran'ny retort. Raha ilaina dia azo tsindrona mandeha ho azy ity ampahan'ny rano ity amin'ny fiandohan'ny fanafanana. Ho an'ny vokatra feno hafanana, io ampahan'ny rano io dia azo hafanaina aloha ao anaty fitoeran-drano mafana ary avy eo atsindrona. Mandritra ny fizotran'ny fanamainana manontolo, ity ampahany amin'ny rano ity dia apetaka amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny paompy mikoriana be sy ny tadim-panafody efatra namboarina namboarina isaky ny fitoeram-bokatra mba hahatratrarana ny vokatra mitovy amin'ny toeran'ny lovia eo amin'ny sosona ambony sy ambany. , aloha, aoriana, havia sy havanana. Ka ny kalitaon'ny fanafanana sy ny fanamainana tsara indrindra dia tratra. Satria ny lalan'ny noza dia mazava, marina, mitovy ary feno ny fanaparitahana rano mafana azo alaina eo afovoan'ny lovia tsirairay. Rafitra idealy iray hanatsarana ny tsy fitovian'ny maripana ao amin'ny fitoeram-pamokarana tamberim-bola lehibe.
Ampiasao ny exchanger hafanana spiral tube ho an'ny retort sterilization ary amin'ny dingana fanamainana sy fampangatsiahana, ny rano mandeha dia mandalo amin'ny lafiny iray, ary ny etona sy ny rano mangatsiaka mamakivaky ny lafiny iray hafa, mba tsy hifandray mivantana amin'ny etona ny vokatra vitaina. ary ny rano mangatsiaka mba hahatsapana ny fanafanana sy ny fihenan'ny aseptika.
Mandritra ny fizotrany rehetra, ny tsindry ao anaty ny retort dia fehezin'ny programa amin'ny alàlan'ny famahanana na famoahana rivotra voafintina amin'ny alàlan'ny valizy mandeha ho azy mankany amin'ilay valiny. Noho ny fanamafisana ny rano, ny tsindry ao amin'ny retort dia tsy voakasiky ny mari-pana, ary ny tsindry azo apetraka malalaka arakaraka ny fonosana vokatra samihafa, mahatonga ny fitaovana azo ampiharina be kokoa (kapoaka telo, kapoaka roa sosona, malefaka kitapo fonosana, tavoahangy vera, fonosana plastika sns).
Rehefa vita ny fizotran'ny fanamorana, dia hisy fambara fanairana. Amin'izao fotoana izao, ny varavarana dia azo sokafana ary alefa. Avy eo miomàna hanadio ny vokatra manaraka.
Ny fitovian'ny fizarana mari-pana ao amin'ny retort dia +/- 0,5 ℃, ary ny tsindry dia voafehy amin'ny 0.05Bar.
Fantsona plastika Kitapo fonosana malefaka
Vokatra vita amin'ny ronono fonosana amin'ny fonosana mora azo
Legioma sy voankazo (holatra, legioma, tsaramaso) fonosina amin'ny lasaka malefaka
Hena, akoho amam-borona ao anaty kitapo fonosana mora azo
Trondro sy hazan-dranomasina anaty kitapo fonosana mora azo
Sakafo zazakely amin'ny kitapo fonosana mora azo
Sakafo vonona hihinana amin'ny paosy fonosana mora azo
Sakafo biby feno fonosana ao anaty paosy malefaka
Previous: Famalian'i Cascade
Manaraka: Rano fisitrihana rano
Famonoana rano hafainganam-pandeha maro
Mitifitra Sterilizer Retort
Masinina famerenam-bidy rano
Masinina famerenam-bidy sterilizing rano